I-China X6 eqondile yokukhiqiza nefektri | Ubuchwepheshe Bezokwelapha Obusekelwe Ebufakazini
Isibhamu sokushisa esiphongweni (i-infrared thermometer) senzelwe ukukala izinga lokushisa ebunzini lomzimba womuntu futhi silula futhi kulula ukusisebenzisa. Isilinganiso sokushisa esinembile ngomzuzwana owodwa, akukho ndawo ye-laser, gwema ukulimala okungenzeka emehlweni, asikho isidingo sokuthinta isikhumba somuntu, gwema ukutheleleka okuthelelanayo, isilinganiso sokushisa okukodwa, bese ubheka umkhuhlane. Ilungele abasebenzisi bekhaya, amahhotela, imitapo yolwazi, amabhizinisi amakhulu nezikhungo, futhi ingasetshenziswa nasezibhedlela, ezikoleni, emasikweni, ezikhumulweni zezindiza nakwezinye izindawo eziphelele, futhi ingasetshenziswa ngabasebenzi bezokwelapha emitholampilo.
Izinga lokushisa lomzimba elejwayelekile lomzimba womuntu liphakathi kuka-36 ～ 37 ℃ ngokwesilinganiso). Uma weqa u-37.1 ℃, kusho umkhuhlane, u-37.3_38 ℃ usho umkhuhlane ophansi, kanti u-38.1-40 ℃ usho umkhuhlane omkhulu. Ngenhla kuka-40 ° C, impilo isengozini noma nini.
1. Izindlela ezintathu, isibonisi sangemuva nemodi yokukala enembe kakhudlwana ukugqama kwalo mkhiqizo.
2. Kunezindlela ezintathu zokukala izinga lokushisa lomzimba womuntu, into nezinto ezisendlini.
3. Isibonisi sangemuva semibala emithathu sicacile futhi sihle kakhulu.
4. Isilinganiso sokushisa esingathintani sithatha umzuzwana owodwa ukukala kalula, futhi iphenyo yenzwa ye-infrared iqinisekisa ukusebenza kahle okuphelele nokungabi namaphutha phezulu nangaphansi ku-0.3 °.
5. Isibonisi sefonti emnyama esikrinini esikhulu. I-fuselage yakhelwe ngokuhambisana nokwenziwa komuntu, isibambo esigobile sonyusa ukubamba, futhi izinga lokushisa liphakathi kwama-32-42 degrees.
6. Ibanga lokulinganisa cishe liyi-5CM, ibanga lokushisa eliphansi ngama-degree angama-32 kanti ubukhulu bungu-42 degrees. Iphutha lingu-0.3.
1. Isilinganiso sokushisa komzimba womuntu: Linganisa ngokunembile izinga lokushisa komzimba womuntu, ushintshe ama-thermometer endabuko e-mercury. Abesifazane abafuna ukuba nezingane bangasebenzisa ama-infrared thermometers (ebunzini thermometer) ukubheka ukushisa komzimba wabo nganoma yisiphi isikhathi, ukurekhoda ukushisa komzimba ngesikhathi sokukhulelwa, bakhethe isikhathi esifanele sokukhulelwa, futhi balinganise izinga lokushisa ukunquma ukukhulelwa.
Vele, into ebaluleke kakhulu ukubuka ukuthi ngabe kukhona okungahambi kahle ekushiseni komzimba wakho nganoma yisiphi isikhathi, ukugwema ukutheleleka ngomkhuhlane, nokuvikela umkhuhlane wezingulube.
2. Isilinganiso sokushisa kwesikhumba: linganisa izinga lokushisa elingaphezulu kwesikhumba somuntu. Isibonelo, ingasetshenziselwa ukufaka kabusha isitho somzimba.
3. Isilinganiso sokushisa kwento: linganisa izinga lokushisa kwento, isibonelo, lingasetshenziswa ukukala izinga lokushisa kobuso betiye yetiye.
4. Isilinganiso sokushisa samanzi: linganisa izinga lokushisa ketshezi, njengamazinga okushisa wamanzi okugeza omntwana. Lapho ingane igeza, linganisa izinga lokushisa kwamanzi, ungabe usakhathazeka ngokubanda noma ngokushisa; ingalinganisa futhi izinga lokushisa kwamanzi ebhodleleni lobisi ukwenza lula ukulungiswa kobisi lwempuphu yengane;
5. Iyakwazi ukukala ukushisa kwamakamelo
1. Sicela ufunde imiyalo yokusetshenziswa ngaphambi kwesilinganiso, nebunzi kufanele ligcinwe lomile, nezinwele akumele zimboze isiphongo (sicela wenze isilinganiso endaweni eyi-10 ℃ -40 ℃) ukuqinisekisa ukunemba kwesilinganiso.
2. Izinga lokushisa ebunzini elilinganiswe ngokushesha ngalo mkhiqizo elenzelwe inkomba kuphela futhi akufanele lisetshenziswe njengesisekelo sokwahlulela ngokwezokwelapha. Uma kutholakala noma yikuphi ukushisa okungajwayelekile komzimba, sicela usebenzise i-thermometer yezokwelapha ukuthola esinye isilinganiso.
3. Sicela uvikele ilensi yokuzwa bese uyihlanza ngesikhathi. Uma ukushisa kwemvelo okuguqukayo kuguquka kakhulu, udinga ukubeka insimbi yokulinganisa endaweni ofuna ukuyikala imizuzu engama-20, bese uyalinda ukuze izinze ukuze ivumelane nezinga lokushisa kwemvelo ngaphambi kokuyisebenzisa ukuthola inani elifanele ngokwengeziwe.
Olandelayo: X6 mpunga